Guddoomiyaha gobolka Benaadir oo Casho sharaf u sameeyey Madaxda Dawlad Gobolleedyada dalka – Qaranimo Online
You are here: Home 2018 February 12 Guddoomiyaha gobolka Benaadir oo Casho sharaf u sameeyey Madaxda Dawlad Gobolleedyada dalka
Muqdisho, 12, February 2018 — Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa casho sharaf u sameeyey madaxda dawlad gobolleedyada dalka. Waxana sidoo kale ka qeyb galay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo marti sharaf kale.
Qunsulka Guud ee Cadan oo ku baaqay in si deg deg ah loo fuliyo waxa ka soo baxay shirkii Brussels October 22, 2015
As the world’s largest refugee camp closes, some Kenyans struggle to prove they belong in Kenya June 28, 2016
Mareykanka Oo Ka Walaacsan xiisadda Gacan Ka hadalka Ee u dhaxeeysa Soomaalida iyo Oromada Ethiopia December 14, 2017
Gudoomiye Taabid oo amar dul dhigay booyadaha iyo gaadiidka xamuulka. October 30, 2017
RW Cumar Cabdirashiid oo Guri Xoog ku haysta Muqdisho July 14, 2016
RW Cumar iyo Gaas oo kormeer ku tagey garoonka cusub ee magaalada Garowe March 31, 2016
Kenya oo AL-shabab ku eedeysay weerar ka dhacay Lamu August 3, 2017
Wafdi ka Socda QM Oo Maanta Ku wajahan Magaalada Kismaayo December 18, 2017
Shir looga hadlayo qaybsiga kheyraadka shidaalka Soomaaliya oo ka furmay Nairobi. December 2, 2015
Guddoomiye Jawaari oo kulammo la qaatay guddoomiyeyaasha Baarlamaannada Turkey, Iraq Iyo Pakistan January 26, 2016
Somali presence big in state DNC delegation July 28, 2016